ကွန်ပျူတာဆောင်းပါးတိုများ ကွန်ပျူတာ ကော်ပိုရေးရှင်းများ ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်နည်းပညာ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မင်း ကွန်ပျူတာ အချက်အလက် ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ရေးသားခြင်း ဒေတာဘေ့စ် ကွန်ပျူတာ ဖိုင်များ ဖောင့်များ ကွန်ပျူတာဘာသာစကားများ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေး ဝက်ဘ် နည်းပညာ ကွန်ပျူတာ ဟတ်ဒ်ဝဲလ် အင်တာနက်
ကွန်ပျူတာ အင်္ဂလိပ်: computer ဆိုသည်မှာ ထည့်သွင်းထားသော ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် အစီစဉ်တကျ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း အချက်အလက် များကို စီမံခန့်ခွဲပေးသော ကိရိယာဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာများသည် ညွှန်ကြားချက်များပေါ် မူတည်၍ ဂဏန်းသင်္ချာနှင့်ယုတ္တိဗေဒ ဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများကို အစီအစဉ်တကျ အလိုအလျောက် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာတစ်ခုတွင် အခြေခံအားဖြင့် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းရန် မှတ်ဉာဏ်၊ ဂဏန်းသင်္ချာနှင့် ယုတ္တိဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် ထိုသို့တွက်ချက်မှုများကို မှတ်ဉာဏ်အတွင်း သိမ်းဆည်းထားသော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း စီစဉ်ကွပ်ကဲပေးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ကွန်ပျူတာ ...
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ဂေါ့ကျေးရွာရှိ ဝန္ဒာမိတောင်ခြေတွင် တည်ရှိသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့၊ မကြီးကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မကြီးကန်ကွင်းအမှတ် ၊ မကွေး-တောင်တွင်းကြီးကားလမ်းမဘေး မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၂၅/၂ နှင့် ၃၂၅/၅ ကြားတည်ရှိပြီး၊ အကျယ်အဝန်းမှာ ဧက ရှိသည်။သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ များကိုသင်ကြားပေးနေသည်။ ခေတ္တကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် ဒေါက်တာ စိုးလင်းအောင်၊ Ph.D၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ မှ တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။ ကွန်ပျူ တာတက္ကသိုလ်မှ ဒီပလိုမာဦးရေ ဦး၊ ဘွဲ့ရဦးရေ ဦး၊ မဟာဘွဲ့ရဦးရေဦး စုစုပေါင်း ဦး မွေးထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင် ...
မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ဘာသာရပ်များအတွက် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့နှင့် မဟာဘွဲ့သင်တန်းများကို တက်ရောက်နိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့မှမိုင် နှင့် ကလေးဝမြို့မှ မိုင် ကွာဝေး၍ အေးသာယာကျေးရွာ အနီးတွင် တည်ရှိပြီး ၃၈.၆ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့၊ လေယဉ်ကွင်းလမ်း၊ ညောင်ရမ်းတောင်ရပ်တွင် တည်ရှိသည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ASP.NET သည် Microsoft မှ ထုတ်လုပ်သော dynamic web site များ၊ web application များ၊ web service များ ရေးသား နိုင်သော web application framework ဖြစ်သည်။ ASP.NET ကို ၂၀၀၂ ဇန်နဝါရီလတွင်.NET Framework version 1.0 နှင် အတူ တွက်ရှိသည်။ လည်းကောင်း Active Server Pages နည်းပညာ ၏ နောက်ဆက်တွဲ ASP.NET သည် Common Language Runtime ကိုအခြေံပြီး.NET language များ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာကို boot လုပ်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်သော စနစ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် Disk တစ်ခု၏ ပထမဆုံး sector ဖြစ်သည်။ Disk ကို Boot လုပ်ရန် သို့မဟုတ် စတင်ရန် အသုံးပြုသည့် BIOS ပရိုဂရမ်များကို Load လုပ်ရန် disk ၏ layout နှင့် ပရိုဂရမ်သွင်း code များကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသော သတင်းအချက်အလက် အလုံအလောက်ပါဝင်သည်။ ယင်း sector ပျက်စီးသွားပါက ကွန်ပျူတာကို boot လုပ်ရန် ယင်း disk ကို အသုံးပြု၍ မရတော့ပါ။
C++ သည် ယေဘူယျသုံး programming language ဖြစ်သည်။ C++ ကို low-level နှင့် high-level တို့အား ချိတ်ဆက်ပေးသော middle-level language အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ C++ သည် statically typed, free-form, multi-paradigm, compiled language ဖြစ်ပြီး compile လုပ်သောအခါ သက်ဆိုင်ရာ စက်အတွက် machine code ထုတ်ပေးပြီး procedural programming, data abstraction, object-oriented programming, and generic programming များ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Calligra Suite ဆိုသည်မှာ office suite တစ်ခုဖြစ်ပြီး KDE အတွက်ဖြစ်သည်။ Component အားလုံးသည် Free Software/Open source license ဖြစ်သည်။ KOffice ကို ၂၀၁၀ တွင် Calligra Suite အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်။ KOffice application ကို OpenDocument အသွင်အပြင်ဖြင့် အသုံးပြုထားပြီး လိုအပ်သော file format များကို KDE မှ ထုတ်ကာ KOffice homepage တွင် ရရှိနိုင်သည်။
Mac OS X Lion သည် အက်ပဲကုမ္ပဏီ၏ ၈ ခုမြောက်သော စက်မောင်းနှင်စနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပန်းသီးကုမ္ပဏီထုတ် ဆာဗာကွန်ပျူတာများ၊ လက်ဆွဲကွန်ပျူတာများ၊ စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာများအား မောင်းနှင်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ၇က်နေ့တွင် တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
ကွန်ပြူတာ Hardware အချို့. Monitor HardDisk Printer Graphic Card Power Supply RAM Motherboard Drives CD /DVD Mouse CPUCentral Processing Unit Floppy Disk စသည်ဖြင့်. Keyboard
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းကို ၁၉၉၈ခုနှစ် မေလ ၁၇ရက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်အမည်အားဖြင့် Myanmar Computer Industry Association ဟုခေါ်ဆိုသည်။
ဆာဗာServer ဆိုသည်မှာ အချက်အလက်data များအား စုစည်းထားသောနေရာ ဝါ တစုတစည်းတည်းရရှိနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ ဆာဗာServer များသည် များသောအားဖြင့် cloud based အချက်အလက် များသိုလှောင်ထားသောနေရာသာဖြစ်သည်။
ဒြပ်မဲ့စက်（Virtual Machine,VM）ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာတစ်ခု၏ ပံ့ပိုးပေးနေမှုများကို တုယောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် Framework များကို ဆိုလိုပါသည်။ တဖန် တုယောင်ပြီး ပြုလုပ်ပေးထားသော ကွန်ပျူတာကို ဒြပ်မဲ့ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် ဒြပ်မဲ့စက်ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ဒြပ်မဲ့စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ ကွန်ပျူတာအမျိုးမျိုးနှင့်၊ OS အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အခြားသော အာခီတက်ချာသုံး ဆော့ဖ်ဝဲများကိုလည်း အသုံးပြုစေနိုင်ပါသည်။
Fiber to the Xစနစ်ဟာ ဘယ်broadband network ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မဆို ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးOptical fiber အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုထားတာက Last mile telecommunication တွေအတွက် သာမန်သုံးနေကျ သတ္ထုLocal loop ကို အစားထိုးနေရာ ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။ FTTN, FTTC,FTTB, FTTH နဲ့ FTTH စတဲ့ X တစ်လုံးကိုဖြည့်ပြီး Fiber မျိုးဆက်ကို တဖြည်းဖြည်း Configurate လုပ်ယူလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Boot disk ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ စတင်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးသည့် လုပ်ဆောင်မှုစနစ်ပိုင်းတစ်ခု ပါရှိသော ကွန်ပျူတာ ဒစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုအပ်သည့်အခါတွင် ခလုတ်မဖွင့်မီ Boot disk ကို disk drive ထဲတွင် ထည့်ထားပါက ဟတ်ဒ်ဒစ် ကို အရင်ဦးစွာ ရယူမသုံးစွဲနိုင်တော့ပါ။
မိခင်ဘာသာစကားသုံး ကွန်ပျူတာစနစ်ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာနှင့် လူသားတို့ဆက်သွယ်နိုင်ရန် မိခင်ဘာသာစကားအား ကွန်ပျူတာ၌ အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားသုံး ကွန်ပျူတာစနစ်သည် တီထွင်ဖန်တီးထားသော အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ပညာရပ် ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ မိခင်ဘာသာစကားသုံး ကွန်ပျူတာစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် ကာလအတွင်းမှာ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ယင်းထက် စောလျှင်စွာလည်း အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့နိုင်သည်ဟု ယူဆရသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်၌ စက်၏ တွက်ချက်ခြင်းနှင့် အသိဉာဏ် ဆိုသည့် ဆောင်းပါးသည် ထင်ရှားခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာ သုံးသူမှ လက်ခံခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်မှတဆင့် ဝင်ရောက်လာတတ်သည့် ကြော်ငြာကို ဆိုလိုသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ဖွင့်လျှင် နောက်ခံမှ ပါလာတတ်သည်။ အချို့သော Adware များသည် ဂိမ်း screen-saver များအဖြစ် စွဲမက်ဖွယ် ဖော်ပြဝင်ရောက်ကြသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ရာတွင် မကြာခဏ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သင်၏ ကီးဘုတ်ရိုက်ချက်များကို ချိတ်ဆက်ဖမ်းယူကာ အချက်အလက်များကို အခြားကွန်ပျူတာများသို့ ပို့တတ်၍ Adwareမှ Spywareသို့ အသွင်ပြောင်းနိုင်သော သတိထားရမည့် ဖိုင်များဖြစ်သည်။
​အေပီအန် ဆိုသည်မှာ GSM, GPRS, 3G 4G နှင့် ကွန်ပျူတာအချို့တွင် အင်တာနက်များ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် တံခါး​ပေါက်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ Service မှ​ပေးထားသည့် အေပီအန်များကို ထည့်သွင်းမှသာ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့မှသာ Service သည် စစ်​ဆေးပီး သင့်​တော်​သော အင်တာနက်စနစ်ကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Parallel ATA စံနှုန်း